ezivuvukele unikeza omningi zikhathi edabukisayo. Ukwephula silulumagama, nobunzima inqubo ukuhlafuna, ukushintsha ukuma kobuso - uhlu imiphumela yalesi sifo. Uma ezivuvukele, udinga ngokushesha imbangela futhi uma kungenzeka ukuba athathe izinyathelo ezifanele.
Esinye isizathu Ithumba gingivitis. Ngezinye izikhathi kwenzeka ngemva kokuvakashela udokotela wamazinyo uma hhayi high kakhulu ukwelashwa temlomo wawenziwa, okungasekelwe ngokuphelele zilethwe uphawu, okuyinto ngezinga elithile ungakwazi ona izinsini. Kungaba uphawu leakproof futhi eduze kwalo kungenzeka ukutheleleka yesibili.
Uma ezivuvukele, isizinda izinyo nako kungabangela izinkinga ezazingase. Esimweni lapho kuphakama isimila endaweni ethile, kudingeka ubheke onguchwepheshe. Inqubo kumele kumiswe ngokushesha ukuze ukuvuvukala akusho ukusakaza olwengeziwe.
Inkinga kungenzeka ngenxa yokuthi ukuthi ezivuvukele e izinyo ngokuhlakanipha. Khona-ke kumelwe uthathe isithombe-X ray ukunquma isiqondiso ekukhuleni kwayo.
Ukuze kube lula ubuhlungu a izinsini encane imbobo. Ukuhlakanipha izinyo angase akhule engela. Kwenzeka futhi ukuthi isayithi ukuvuvukala. Kulokhu, usizo Iwukungenela kuhlinzwa kuphela, futhi ngeke akwenze ngaphandle kokususwa izinyo.
Uma izinsini kukhona ukuvuvukala, ngezizathu ezingaziwa, ke okuqotho kungase ukukhiqiza kuphela wamazinyo, ngoba kungenzeka ukuthi ithumba, pulpitis noma periodontitis. Nokho, kungenzeka ukuthi ingabi yalezi zizathu, ngaleso sikhathi udokotela ekunika ukwelashwa ejenti ukuhahaza elwa namagciwane. Kodwa bekezela ngayinye esimisiwe ukwelashwa.
Abanye abantu abazi ukuthi yini okumele uyenze izinsini lapho ivuvukele. Abaningi lula ubuhlungu usebenzisa ezifana ikhambi Folk njengoba isixazululo soda. Ngokuvamile kuyasiza uma azikho eziyingozi. Kungase futhi isetshenziswe, futhi isixazululo sodium chloride. Can uyoqeda ubuhlungu futhi amaphesenti 3 isixazululo-hydrogen peroxide endaweni isilinganiso ngamanzi 1: 1.
Uma izinsini kukhona ukuvuvukala obukhulu, kungasiza ezinye izindlela infusions amakhambi noma izixazululo ukuthi ilula kakhulu ekuwulungiseleleni.
Okokuqala, ungazama ukuncibilikisa ingilazi efudumele amanzi iconsi iodine kanye baking soda in imali engeqile kwengxenye isipuni. Uma uxubha ubuhlungu ayikhuphuki, kungenzeka ukuthi uphinde le nqubo yonke imizuzu eyishumi nanhlanu. Le isixazululo siyasebenza kakhulu, ngoba soda waziwa ngekhono layo ekunciphiseni izinhlungu, futhi iodine - a isinqandakuvunda ezinhle.
Camomile, calendula, sage futhi uye wazibonakalisa ngasohlangothini oluhle kakhulu. Ngo ingilazi ukubeka omunye isipuni imbiza ngalinye.
Ngalesosikhathi thela konke amanzi abilayo futhi sokunika imizuzu eyishumi nanhlanu. Ekupheleni isikhathi esabelwe udinga ukwengeza amanzi abandayo abilisiwe, futhi ukwenza kanjalo nje izinga lokushisa ukumnika ilingana ekamelweni lokushisa. Uxubha umlomo kumele kwenziwe kaningi ngangokunokwenzeka, ngakho njengoba calendulakuva chamomile abulale ukutheleleka, futhi Sage kususa isimila nendlala okuthiwa i ukumisa ukuvuvukala.
Zonke lezingcaphuno ukuletha umphumela omuhle omuhle, futhi hashaza kuyadingeka eside ngangokunokwenzeka, njalo emizuzwini eyishumi nanhlanu.
Kodwa Ukubusa ebaluleke kakhulu ukukhumbula - ke noma kunjalo hhayi ukusebenzisa efudumele Ukushisa pad noma okuthile ukufudumala ngesikhathi ezivuvukele, njenganoma yikuphi ukushisa kunomthelela ubomvu, nakuba ubuhlungu zingase ziphele okwesikhashana.
Izimbangela izinsini izimila zihlukile. Lokhu kungaba ecucuza, gingivitis, ukuvuvukala emsipheni yamazinyo, okuvela kuyo nginesimila noma umgodi elincane izinyo, okuyinto ngisho angeke ngaphawula. Kodwa ukuthola ukuthi ukudla kungaholela nemiphumela ebuhlungu, njengoba ithumba. Ngakho-ke, kuphela wamazinyo kungaba imbangela isimila kweqiniso futhi ukwabela inqubo efanele. Uma singasinaki ukuvakashelwa kanye ukubambezeleka ukwelashwa udokotela, kungaba nemiphumela sokukhaphela sasisibi ngaphezu uzowathola lokucabanga kulesi simo.
Umsizi weCanscer - amatshe agugu
Izinto ezidingekayo kakhulu izingane